Vaovao - Vaovao fohy an'ny electrite electrode CN
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2019, ny tsenan'ny electrode grafit an-trano dia nampiseho fironana fitomboan'ny vidiny sy ny fidinan'ny vidiny. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona, ny vokatra 18 mpanamboatra elektrônatra elektrônina manan-danja ao Shina dia 322.200 taonina, tafakatra 30,2% isan-taona; 171 700 taonina ny fanondranana elektroda an-tsokosin'i Shina, tafakatra 22,2% izany tamin'ny volana lasa teo.
Raha misy fidinan'ny vidim-piainana any an-toerana dia samy mametraka ny fahitany ny tsena fanondranana avokoa ny tsirairay. Avy amin'ny salan'isa vidin'ny fanondranana elektroda an-trano an-trano manomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona, dia azo jerena fa na dia ny fironana ambany aza, ny lohasaha ambany indrindra dia niseho tamin'ny volana aprily tamin'ny $ 6,24. / kg, nefa mbola ambony noho ny vidiny antonony anatiny mandritra io fotoana io ihany.
Raha ny habetsany dia avo kokoa noho ny tamin'ny telo taona lasa ny isam-bolana fanondranana elektrônaly grafita an-trano manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona 2019. Indrindra amin'ity taona ity, miharihary ny fiakaran'ny volan'ny fanondranana. Azo jerena fa ny fandefasana elektrônaly grafita sinoa amin'ny tsena any ivelany dia nitombo tao anatin'ny roa taona lasa.
Raha ny fomba fijerin'ny firenena mpanondrana dia Malezia, Torkia ary Rosia no mpanondrana telo voalohany amin'ireo firenena nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny jona 2019, arahin'i India, Oman, Korea atsimo ary Italia.
Amin'ny tapany faharoa amin'ny taona, miaraka amin'ny fitomboan'ny famatsian'ireo elektrônaly grafita lehibe an-trano, dia mbola hosedraina ny haavon'ny vidiny ankehitriny, ary hitombo arak'izany ny fifaninan'ny vokatra manerantany. Tombanana ho 25% ny fanondranana electrode electrode an'i Shina amin'ny taona 2019.